Sida loo sii qulquli Video ka Phone in TV?
Fikradda ah ee casriga ah ayaa la wareegay adduunka maanta. Iyada oo shirkadaha maalgashiga khayraadka weyn iyo wakhti ku koraya, sawir cusub bil walba si ay ugu adeegaan si ay dhagaystayaasha adduunka oo dhan, kacsanaan ku wareegsan qalabka durugsan uma muuqato in ay la joojin. Laga soo xiriir qaali cable, dadka oo haatan ka socdaan jihada xoogga 4G iyo internet dhaqso si aad u eegto muujinaya in ay jecel yihiin, daawadaan ciyaaraha ay ku nool yihiin, iyo dhirtuba ay xad-dhaaf ah filimada ee telefoonada iyaga u gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, tani ma gelin HDTV ka soo ganacsiga, sida weli size iyo tayada sawirka sandal gaar ah u LCD iyo saarayaasha LED. Hoos waxaa ku qoran, waxaan u eegno oo ku saabsan sida aad ka qalabka Android oo iPhone qulquli karaan warbaahinta in HDTVs aad.
Qaybta 1aad: Sida loo sii qulquli Videos ka Android Phone in TV?
Qeybta 2: Sida loo sii qulquli Video ka iPhone ah in aad TV?
Qeybta 3: Download Video Free la TunesGo Wondershare
Si aad u sii qulquli content warbaahinta ka Device Android si aad u computer, waxaan u isticmaali doonaa codsiga iMediaShare ah.
Ka dib markii tallaabooyinku:
Tallaabada ugu horeyn waa in la soo dajiyo app iMediaShare qalabka Android aad. Tan iyo codsiga taageertaa version kasta Android ka dib 1.6, waafaqid ma noqon doonto arrin. Sida aad buuxiso rakibo, aad hesho macluumaad ku saabsan ka shaqeynta iyo tilmaamo ku saabsan sida loo isticmaalo. Next, aad loo soo bandhigi doonaan liiska qalabka socon aad qulquli karaan in.
Ka dib markii ay hindiseen noqon lahaa liiska qaybaha aad rabto in aad sii qulquli content ka. Users sax karaan qaybaha ay daneynayaan iyo buuxiso tallaabada.
Waxaad markaas wareejiyey diyaariyeen ah ee content online aad kala dooran karto. Si aad u billowdo leh, waxaa raalli ka yahay inuu tiraan ku ah danaha iyo da'da koox kasta. Waayo, kuwa ay Caadeesteen in ay ka saaciday inay dhex channels ay, go'aanka ah in la doorto show hal noqon doono caqabad ku ah sidii ay jiraan wax badan uu ka soo xusho.
Ka dib markii doorashada show ee aad dooratay, waxaad la gooyo waa in liiska weydiinaya in aad doorato qalabka si qulquli in. Mar naqdida saami ku xirnaan lahaa xawaaraha ay bixiyaan aad network wireless iyo gaadiidka lagu hadda gacanta ku taabtay.
Waxa xiiso leh, codsigan ayaa sidoo kale kaa caawin karaan fursado madadaalo aad Device Android marka laga reebo tayada hoorto on your TV. Iyadoo version xorta ah ee app taasi la iman raaxo xayeysiis gujisid iyo la'aanta geeyo HD, version pro Koobay HD arkaysid oo ay la socdaan eber jeediya.
Waxaan ka hadli doonaa functionalities ee Airplay iyo Apple TV halka isticmaalaya iPhone inay sii qulquli content warbaahinta on HDTVs our.
Si aad u billowdo leh, waa inaad hubisaa in aad isticmaasho version labaad ama ay casriyayn loogu TV Apple ah. Marka laga soo taggo, version iPhone waa in ay ahaataa mid ka iPhone 4 ama jidiidin ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadinayso tayada sareeya ee geeyo, hubi in aad u cusboonaysiiso ay hindiseen in nooca ugu dambeeya ee macruufka.
Awood aad TV iyo Apple TV Unit. Aqbasho Your TV waa in ay ahaataa in aad aqbasho Apple TV iyo interface Apple TV waa in laga arki. In ay saldhigyo Apple TV, shid AirPlay.
Waxaa loo baahan yahay in aad ku xidhi aad iPhone shabakad guriga. Wixii geeyo si loo qaadan meel on your telefishinka, waxaa lagama maarmaan ah in aad iPhone iyo TV Apple yihiin shabakad isku mid ah.
Si loo sii qulquli aad idil screen iPhone TV, u tag xarunta xakamaynta aad telefoonka, ka jaftaa button AirPlay ah, oo ka menu ka muuqata, dooro TV Apple. Doorashadan waxa uu diyaar u yahay iOS7 iyo iOS8 aad.
Waxa kale oo aad sii qulquli karaan content gaar ah oo ku saabsan TV by ciyaaro in faylka gaarka ah ee aad iPhone dibna looga faa'idaysan button AirPlay ka garab badhanka 'Next' on gacanta ku loo maqli karo. Tani waxay kaa caawin lahaa in geeyo kartoo.
Users waxay fursad u leeyihiin in ay awood u mirroring sida ay oo soo bandhigtay bandhig ku saabsan labada shaashadaha. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan mirroring, bandhigay waa kaliya la arki karo oo kaliya telefishanka on. Habkaani wuxuu ku mirroring waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro bandhigyo iyo siminaaro ama xitaa halka riyaaqayaa aad video ciyaarta jecel.
Isticmaalka codsiyada kor ku xusan, mid wirelessly qulquli karaan xogta laga qalabka ay Android oo iPhone in ay HDTVs. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid sidoo kale dooran kartaa fursadaha banki sida cable HDMI in ay ku samaysay geeyo ah.
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli Video ka Phone in TV?